ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအား ကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးမှူ့အဖြေကို အသိပေးလာခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း – Cele Top Stars
ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအား ကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးမှူ့အဖြေကို အသိပေးလာခဲ့တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
August 7, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန် ရက်စာမျက်နှာကနေ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း မျှဝေဖော်ပြလာ ခဲ့ပါတယ်။ ဝိုင်းစုကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ကိုဗစ် စစ်ဆေးမှုရ လဒ်နဲ့အတူ “ ခေတ်မှီသွားပြီ ” ဟုဆိုပြီး ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းမျှဝေလာခဲ့တာပါ..။
လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြောင့် ကူးစက်မှုနှုန်းက မြင့်တက်နေခဲ့ပြီး လူတိုင်းလိုလို ကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရပါတယ်။ အောင်လကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်က ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ကြောင်း ဝိုင်းစုကသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ပဲ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့မှာ သူလည်း ကူးစက်ခံရကြောင်းကို ထပ်မံမျှဝေဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ဝိုင်းစုကို ချစ်ပြီး အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အားမငယ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ အမြန်ဆုံးရောဂါပျောက်ကင်းအောင် စနစ်တကျနေထိုင်ဖို့ အားပေးစကား တွေကို မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုထားခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေထဲက ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝိုင်းစုရဲ့ ဒီသတင်းလေးကို မျှဝေဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်.
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောဖွဈတဲ့ အဆိုတျော သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး ကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျ ရကျစာမကျြနှာကနေ ကိုဗဈကူးစကျခံလိုကျရပွီဖွဈတဲ့အကွောငျး မြှဝဖေျောပွလာ ခဲ့ပါတယျ။ ဝိုငျးစုကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ကိုဗဈ စဈဆေးမှုရ လဒျနဲ့အတူ “ ခတျေမှီသှားပွီ ” ဟုဆိုပွီး ကူးစကျခံလိုကျရပွီဖွဈကွောငျးမြှဝလောခဲ့တာပါ..။
လတျတလောမွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈတတိယလှိုငျးကွောငျ့ ကူးစကျမှုနှုနျးက မွငျ့တကျနခေဲ့ပွီး လူတိုငျးလိုလို ကိုဗဈကူးစကျခံနရေပါတယျ။ အောငျလကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးလောကျက ကိုဗဈကူးစကျခံခဲ့ကွောငျး ဝိုငျးစုကသူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနပွေီးတော့ပဲ ပရိသတျတှကေို အသိပေးခဲ့ပွီးနောကျ ဒီနမှေ့ာ သူလညျး ကူးစကျခံရကွောငျးကို ထပျမံမြှဝဖေျောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ..။
ဝိုငျးစုကို ခဈြပွီး အားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ အားမငယျဖို့ စိတျဓာတျမကဖြို့ အမွနျဆုံးရောဂါပြောကျကငျးအောငျ စနဈတကနြထေိုငျဖို့ အားပေးစကား တှကေို မှတျခကျြပေးပွောဆိုထားခဲ့ကွပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီးတှထေဲက ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးရဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဝိုငျးစုရဲ့ ဒီသတငျးလေးကို မြှဝဖေျောပွပေး လိုကျပါတယျ။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော.
မကောင်းမှူ့တွေပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေကို ထိထိမိမိစကားလုံးတွေနဲ့ ပြောလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်